ECHO PHONE (TELEFOONKA ECHO) | ECHO Minnesota
» ECHO PHONE (TELEFOONKA ECHO)
Ayadoo la haysto taageraada kafaalaqaadayaasha deeqsiga jaalka nala ah ee hayadaha degaanka ee caafimaadka iyo ammaanka, ECHO ayaa ku sii siyaadisay ilo kale ee muhiima ah ee lagu darayo saadkeena buuxa 2005 ayadoo lagu siinayo ECHO Phone (Telefoonka ECHO - 1-888-883-8831).
ECHO Phone (Telefoonka ECHO), telefoonka lacag la’aana ee gobolka Minnesota, (lacag laga qaadayo gobolka dibaddiisa) ayaa u adeega jaalliyadadaha ku hadla af Ingiiriis yar ee waddanka oo dhan deggan ayaado la siinayo macluumaad la xariira caafimaadka iyo ammaanka iyo tababuushada xilliyeed ee lagu siidaynayo luqado kala duwan.
Inta lagu jiro xaalad caama ee caafimaadka iyo ammaanka, ECHO Phone (Telefoonka ECHO) waxaa lagu bixin doonaa farrimaha ugu dambeeyay ee degdegga iyo tusmooyin ka socda madaxda caafimaadka iyo ammaanka. Isticmaalayaasha waxaa lagu dhiirrigalinayaa in ay had iyo jeer soo wacaan si ay ku helaan macluumaadka kii ugu dambeeyay.
Riix si aad u liisgareyso mowduucyada ECHO Phone (Telefoonka ECHO) oo idil.